Mgbe na search nke kasị mma Devid agụghị ndị gbara na-echekwa na Europe, ị bụghị naanị na-ele anya maka ndị adịghị agafe agafe iberibe. Ị na-na-na-ewere a njem ala ebe nchekwa uzo na ịgagharị akụkọ ihe mere eme. A Devid agụghị ndị gbara ụlọ ahịa bụ akin ka a ejiji ngosi nka, indicative nke a obodo omenala na akụkọ ihe mere eme. Anyị n'anya ịgagharị ọhụrụ na-akpali akpali obodo ụgbọ okporo ígwè, na achọta pụrụ iche na-adịghị agafe agafe uwe bụ onye fun ụzọ na-eme ya. Ebe a na- Best Vintage echekwa na Europe na-esi n'ebe ahụ site Train.
Vlọ ahịa kachasị mma na Europe Paris: Free P Star
Ozugbo ị hopped kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè, Nkwụsị mbụ anyị ga-abụ Free P-Star. Ọ bụrụ na anyị dị ka, ị a hụrụ ihe niile ochie, mgbe ahụ jaunt ka ejiji isi obodo nke Europe ga-ezu na-enweghị a kwụsị ebube jupụtara Free P Star. N'adịghị ka ndị ọzọ Devid agụghị ndị gbara na-echekwa na Paris, FREE'P'STAR adịghị nnọọ ere French abụọ n'aka uwe. Ha na-ere abụọ n'aka uwe si United States kwa na mgbe ụfọdụ ọbụna na ọhụrụ e kere eke mere si ochie uwe. E nwere ihe a nnukwu iche iche nke ukwuu competitively ọnụ Devid agụghị ndị gbara uwe na ngwa si 70s nri site na narị afọ nke 21.
Mgbe Paris nwere ike ịbụ otu nke kasị gara ebe na Europe, anyị na-eche na Berlin bụ n'ụlọ ka ụfọdụ nke swankiest n'okporo ámá ekwekọghị na Europe. Ọ bụghị ihe ijuanya mgbe, na Berlin na-ezigbo ụfọdụ nke Lọ ahịa kachasị mma na Europe. Otu nke anyị onwe anyị na ọkacha mmasị ịbụ Sing nnunnu ojii. Emi odude ke arty district nke Neukolln nke abụọ-aka ogige eden agwakọta ya eclectic collection of Devid agụghị ndị gbara n'uwe na a Cafe na specializes na vegan nri. Anyị na-eche nke a na-enye ya ezigbo ihu na ihe mere na-anọ na shop, na-eri! Ọ nwere a mirage nke mmebe iberibe si 70s’ na 90s’ nakwa dị ka tọrọ ụtọ ejiri mee emeso, Sing nnunnu ojii bụ a na-eto eto niile foodie fashionistas!
Guzo dị ka omenala obodo nke Catalonia, Barcelona nwere avant-garde ma adọrọ adọrọ obi na-adị. Ịchụ oge a ụlọ, ochie ụlọ, okike nri, na buzzing nightlife. Barcelona bụ otu n'ime n'elu European njem ebe. Ma ebe ọ bụ na anyị na-aga n'ime Summer, ọ bụ ihe ga-esi super ọrụ n'aka. N'ihi ya, hụ na ị na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè Early na SaveATrain. Ọ bụghị nanị na Barcelona ufọk ụfọdụ nke Best Vintage-echekwa na Europe, ma ọ bụkwa otu n'ime oge ọkọchị kachasị ewu ewu ezumike ebe. Na n'etiti iri na-atọ ụtọ tapas na tanning na otu n'ime ọtụtụ osimiri, na-oge gara na ịkụ. Nke a ọmarịcha Devid agụghị ndị gbara boutique dị na trendy mụrụ ebe. Jupụta na aka-ahọrọ mmebe uwe, akpa, ọla, na akpụkpọ ụkwụ, a snazzy store kọ Devid agụghị ndị gbara attire ọ bụla afọ iri nke narị afọ nke 20.
Geneva bụ obodo nrọ maka ọnọdụ pụrụ iche na echiche dị ebube nke Mont-Blanc. The kasị elu ọnụ ọgụgụ kasị elu na Europe. The obodo, zuru okè n'ebe maka n'èzí-eme, bụ naanị nkeji ole na ole n'obodo. Geneva is the best starting point to visit the rest of Switzerland ekele ihe magburu onwe ọha iga njikọ ụgbọ okporo ígwè.
Ị nwere ike na-eche .... Nke ahụ dị mma Ama na niile, ma ebe ndị uwe na, girl?! ama m, Geneva ghara maara dị ka a Thrifty obodo, ma nke ahụ bụ ihe mere na ị nwetara anyị. Iji were zoro ezo bara nnukwu uru n'ihi na ị na-amasị a. Maka ndị njem na-achọ ego iji nweta egwuregwu ha na-enweghị ire mkpụrụ obi ha, Ụlọ ahịa Vet na Geneva bụ ụzọ na-atụ!
Part nke Swiss Red Cross, na Devid agụghị ndị gbara ụlọ ahịa na-ejiji orientated karịa ya ọrụ ebere shop ogbo. Ọ nanị akanyam n'aka-ẹmende ochie uwe si iconic ụdị dị ka Givenchy na Celine. Ya mere, ma ị na-na na a hụrụ abụọ n'aka ejiji maka usoro ziri ezi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ ihe gbasara akụ na ụba, lelee Ụlọ ahịa Vet. Ọ bụghị nanị na ihe ha retara gaa kwupụta enyere ndị nọ ná mkpa ma ọ bụ nakwa a welcome ọzọ ka igwe-elu ahịa nke Swiss obodo!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-vintage-stores-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)